Kufuneka wenze ntoni xa ufumana i-AirTag kwimowudi elahlekileyo | Ndisuka mac
Ngokufika kwee-odolo zokuqala zeAirTags, abasebenzisi baya kuqala ukubenza kwaye babongeze kwizinto abafuna ukuphulukana nazo. Kodwa ukuba kunokwenzeka ilahlekile kwaye umnini wale AirTag uyibeka kwimowudi elahlekileyo, kuya kufuneka sazi ukuba masenze ntoni xa sifumana ithegi. La ngamanyathelo ekufuneka uwathathe.
Nge-23 ka-Epreli, ii-AirTags ezintsha zabekwa kwintengiso yaphambi kokuba kuthengiswe kwaye uApple wachaza ukuba bazakuqala ukuhambisa ukusuka ngomhla wama-30. Olo suku lufikile kwaye abanye abanini baxela ukuba sele befumene iodolo ngenye imini. Iindaba ezimnandi zezokuba siza kuqala ukubona ukuba zisetyenziswa njani ezi AirTags. Kodwa ngaphezulu kwayo yonke le nto kufuneka sazi ukuba masenze njani xa sidibana nenye yazo kwaye ingomntu oyifakileyo imowudi elahlekileyo.
I-AirTag iqulethe unomathotholo omncinci weBluetooth osasaza kwii-iPhones ezikufutshane kwaye ivumela umnini we-AirTag ukuba abone ukuba yafunyanwa phi kwimephu. Ukucinga ukuba kukho umntu one-iPhone okanye esinye isixhobo ngaphakathi Fumana inethiwekhi yam kufutshaneUmnini we-AirTag kufuneka abenakho ukuyifumana kwaye azi ukuba iphi na into yabo elahlekileyo.
Ukuba sifumana into elahlekileyo, into ekufuneka siyenzile kukufumana umniniyo kwaye siyibuyisele kubo. Ukuhlala kule nto siyifumeneyo ayiyongcamango ilungileyo. Cinga ukuba ungaphulukana nayo. Ukubuyisa into elahlekileyo kumniniyo, olona khetho lulungileyo kukubamba i-AirTag kufutshane nefowuni yethu ye-iPhone (okanye ye-Android), icala leplastiki elimhlophe lijonge kuthi. Kungenxa yokuba i-AirTag ibandakanya NFC chip ke inokufundwa yiyo nayiphi na i-smartphone ekhoyo ngoku.
I-NFC yeAirTag iya kukhokelela kwiphepha lewebhu. Eli phepha liza kubandakanya ulwazi lwe-AirTag njengenombolo yakho yecala. Ukuba umnini we-AirTag ubeke ithegi kwimowudi elahlekileyo, unokubonelela ngenombolo yefowuni kunye nomyalezo. Olu lwazi loqhakamshelwano luya kuvela kwiphepha lewebhu xa i-AirTag iskeniwe ukuze ukwazi ukunxibelelana nabo.
Isilumko. Siya kube senze isenzo esihle saloo mini. Ukuba nguwe olahlekileyo, khumbula ukuyibeka kwimowudi elahlekileyo kunye nomfowunelwa, kuba ukuba akunjalo ... uya kusalahleka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Kufuneka wenze ntoni xa ufumana i-AirTag kwimowudi elahlekileyo